Hlola i-Stone Town, eTanzania - World Tourism Portal
Hlola Idolobha Lamadwala, eTanzania
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eStone Town, eTanzania.
Yini okufanele uyenze eStone Town, Tanzania.
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni weStown Town
Bukela ividiyo emayelana neStown Town
Hlola i-Stone Town idolobha elikhulu eZanzibar. Ungumuzi obaluleke kakhulu ngokomlando nangobuciko eMpumalanga Afrika. Ukwakhiwa kwaso, iningi langekhulu le-19th, kukhombisa amathonya ahlukahlukene angaphansi kwesiko lamaSwahili, ngenhlanganisela eyingqayizivele yamaMoorish, ama-Arabhu, amaPheresiya, Indian nezakhi zaseYurophu. Ngenxa yalesi sizathu, leli dolobhana lifakiwe kuma-UNESCO's World Heritage Sites e2000
Isikhumulo Sezindiza Sezwekazi lonke ukuphela kwesikhumulo sezindiza kulesi siqhingi. Iyatholakala ngeDar es Salaam, Nairobi, I-Kilimanjaro, kanye nenani elikhulayo lezinye izinkampani zezindiza zase-Afrika nezaseYurophu.
I-Old Fort eduze kweNdlu Yezimanga, iyinqaba yamatshe esindayo eyakhiwa nge-17th century yi-Omani. Inesakhiwo esilingana nesikwele; igceke elingaphakathi manje seliyisikhungo sezamasiko esinezitolo, izindawo zokusebenzela, kanye nenkundla encane lapho kuqhutshwa khona imidanso ebukhoma nomculo nsuku zonke.
I-Museum Museum (I-Palace YaseSultan Yangaphambili). (eyaziwa nangokuthi "Isigodlo Sultan's", "Beit el-Sahel" ngesi-Arabhu) ngesinye isigodlo sambusi wasendulo, futhi osogwini lolwandle, enyakatho yeNdlu Yezimanga Yakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-19th, futhi manje isiphethe imnyuziyamu ephathelene nempilo yansuku zonke yomndeni wasebukhosini baseZanzibari, kufaka phakathi izinto ezazingezika-Sayyida Salme, owayeyindlovukazi yaseZanzibar eyabalekela eYurophu nomyeni wayo.
I-House of Wonders noma i- "Palace of Wonders", eyaziwa nangokuthi "Beit-al-Ajaib", eMizingani Road ohlangothini lolwandle, mhlawumbe yizimpawu ezaziwa kakhulu eStown Town. Yakhiwa nge1883 yabuye yabuyiselwa emuva kweMpi ye-Anglo-Zanzibar ye-1896. Okwakukhona lapho kuhlala khona uSultan, kwaba yisihlalo se-Afro-Shirazi Party ngemuva kwezinguquko. Kwakuwukuqala ukwakhiwa eZanzibar ukuba nogesi kanye nesakhiwo sokuqala eMpumalanga Afrika kube nophiko. Kusukela i-2000, ingaphakathi laso linikezelwe emnyuziyamu ngosiko lwesiSwahili neZanzibar.
Indlu kaLivingstone yisigodlo esincane esakhelwa uSultan Majid bin Said kodwa kamuva sisetshenziswa izithunywa zevangeli zase-Europe. UDavid Livingstone wayehlala endlini ngenkathi elungiselela uhambo lwakhe lokugcina lokuya enkabeni yeTanganyika.
I-Old Dispensary yakhiwa isuka ku-1887 yaya ku-1894 izosebenza njengesibhedlela sokusiza abampofu, kepha yabe isisetshenziswa njenge-dispensary. Ingenye yezakhiwo ezihlotshiswe kahle eS Stone Town, enamakholomu amakhulu aqoshiwe, amafasitela enziwe ngengilazi, nezinto zokuhlobisa ze-neo-classical stucco. Ngemuva kokuwohloka kuma-1970s nama-1980s, isakhiwo sabuyiselwa emuva ngokunembayo yi-AKTC.
ISonto LaseSheshi. Kuthengwe izithunywa zevangeli, isonto lihlala emakethe yokugcina yezigqila emhlabeni. I-altare kuthiwa lakhiwa ngaphezulu kokushayiswa kwemakethe okuthengiswayo.
Amabhavu weHamni Persian Persian ayinkimbinkimbi yezindawo zokugeza zomphakathi ezakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-19th ngabakhi bezakhiwo zaseSiran Barghash bin Said. Lezi zindawo zokugeza azisakavulwa kodwa zivulekele izivakashi. Ukuvakasha kukhawulelwe kwezinye izindawo eziyinkimbinkimbi yangempela ngoba ingxenye yayo (isb, indawo yokudlela) selokhu yaguqulwa yaba yindawo yokuhlala yangasese.
I-Forodhani Gardens iyipaki elincane elisemgwaqweni omkhulu wolwandle iStone Town, phambi kwe-Old Fort kanye neNdlu Yezimanga. Kusanda kubuyiselwa i-AKTC. Njalo kusihlwa ngemuva kokushona kwelanga izingadi ziba nemakethe edumile, ebhekiswe kubavakashi ethengisa ukudla kwasolwandle okuhlanganisiwe nezinye izindlela zokupheka zakwaZanzibari.
Zulazula ezungeze iStone Town ukwazisa izakhiwo zomlando
IFahari Zanzibar, 62 Kenyatta Road, Stone Town (Eduze kwePosi kanye neMercury House). I-09: 00 - 18: 00. I-Fahari Zanzibar Ibhizinisi Lenhlalo, elibhaliswe njenge-NGO, lenza izesekeli zekhwalithi yezimbali Boutique besebenzisa ubuciko nezinto zokwakha eziseZanzibar. Vakashela indawo yokusebenzela enkulu evulekile nesikole kuKenya Kenyan Road, lapho ungabuka khona izikhwama, ubucwebe nezinye izinto zokwenziwa ngekhono futhi uthenge ngqo kubakhiqizi besifazane. Ngokuthenga kwaFahari uzobe uthola umkhiqizo wokuqala ongajwayelekile ngenkathi uxhasa abesifazane bendawo ukwakha ikusasa elizinzileyo. Izimpahla zikanokusho - ezinye izipho ezincane zamanani aphansi.